xxxhdpi/Fill 31 Created with Sketch.
တစ်လ ၁၉၉ကျပ်မှစ၍ဝယ်ယူနိုင်တဲ့ အသက်သာဆုံးအသက်အာမခံကို ၃၀ ရက်၊ ၉၀ ရက်နှင့် ၃၆၅ ရက်စသည်ဖြင့် ရွေးချယ်ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်။ အမျိုးမျိုးသော အာမခံထားငွေပမာဏ ရွေးချယ်စရာများရှိပြီး တယ်လီနောဖုန်းဘေလ်မှ အလွယ်တကူဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်။
စိတ်ချလိုက်ဖ်အာမခံ ဆိုတာ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းနေထိုင်သည့် တယ်လီနော သုံးစွဲသူများအတွက် CB Life နဲ့ တယ်လီနောမြန်မာတို့ရဲ့ ဈေးနှုန်းသင့် အသက်အာမခံဝန်ဆောင်မှုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အာမခံလက်မှတ် ရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေက ဘာတွေလဲ?
ဤအာမခံလက်မှတ်ရဲ့အကျိုးကျေးဇူးများမှာ သတ်မှတ်ထားသော စည်းမျဉ်း ထဲမှာပါရှိတဲ့ မတော်တဆထိခိုက်မှုကြောင့်သေဆုံးခြင်း၊ ထာဝစဉ် မသန်စွမ်း ဖြစ်ခြင်း၊ ကိုယ်ခန္တာအစိတ်အပိုင်းဆုံးရှုံးမှု နှင့် ပြင်းထန်သောထိခိုက် ဒဏ်ရာ ရရှိမှုအစရှိသည်တို့ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော ငွေရေးကြေးရေး ဆုံးရှုံးမှုများ အားမိသားစုဝင်များအတွက် ကူညီထောက်ပံ့ပေးသွားမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အာမခံလက်မှတ် ဝယ်ယူဖို့အတွက် အရွယ်သတ်မှတ်ချက်ကကော?
အသက် ၁၈ နှစ်မှ ၆၀ နှစ်အတွင်းမည်သူမဆို အာမခံလက်မှတ်အားဝယ်ယူနိုင် ပါတယ်။
စိတ်ချလိုက်ဖ်အာမခံဝယ်ယူဖို့ ဘာတွေလိုအပ်ပြီး အာမခံလက်မှတ်ဝယ်ယူဖို့ ဘယ်လိုစတင်ရမလဲ?
အာမခံဝယ်ယူဖို့အတွက် အသုံးပြုနိုင်သည့် တယ်လီနောဆင်းကတ်၊ မှတ်ပုံတင်/နိုင်ငံကူးလက်မှတ်(နိုင်ငံခြားသားများအတွက်) နှင့် လုံလောက်သော ဖုန်းဘေလ်သာလိုအပ်မည်ဖြစ်ပြီး MyTelenor App နှင့် တယ်လီနော ဝက်ပေ့ချ်များမှ တဆင့်မိမိကြိုက်နှစ်သက်ရာ အာမခံလက်မှတ်ကိုဝယ်ယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
အာမခံလက်မှတ်အတွက်ကျသင့်သော ငွေပမာဏအား ဖုန်းဘေလ်မှ အလိုအလျောက် ဖြတ်တောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဆက်လက်သက်တမ်းတိုးကာလသတ်မှတ်ချက်ကကော? ဆက်လက်သက်တမ်းတိုးကာလအတွင်းမှာကော အာမခံကြေးငွေကိုထုတ်ယူနိုင်ပါသလာ?
အာမခံလက်မှတ်အတွက် ဆက်လက်သက်တမ်းတိုးကာလအနေဖြင့် ၃ရက် သတ်မှတ်ထားပြီး အဆိုပါကာလအတွင်းလည်း အာမခံကြေးငွေထုတ်ယူခွင့်ကို CB Life မှခွင့်ပြုထားပါတယ်။
အလိုအလျောက်သက်တမ်းတိုးခြင်းအား Mytelenor (သို့) တယ်လီနောဝက်ဆိုဒ် -> စိတ်ချလိုက်ဖ် -> မိမိ၏အာမခံ တွင်ရပ်တန့်နိုင်ပါသည်။
အလိုအလျောက်သက်တမ်းတိုးခြင်းအား ရပ်တန့်လိုက်ပါက အာမခံကြေးအား ထုတ်ယူနိုင်ပါသေးသလား?
အလိုအလျောက်သက်တမ်းတိုးခြင်းအား ဘယ်လို ပြန်လည်ရယူနိုင်သလဲ?
သင့်အနေဖြင့် အလိုအလျောက်သက်တမ်းတိုးခြင်းရွေးချယ်ထားသည့် အာမခံလက်မှတ်အသစ်အားထပ်မံ ဝယ်ယူရမည်ဖြစ်ပါသည်။
၁လ သို့မဟုတ် ၃လ အာမခံလက်မှတ် အား စုစုပေါင်း ၂ ကြိမ်အထိ ဝယ်ယူနိုင်မည်. သို့သော် အလိုအလျောက်သက်တမ်းတိုးမှုကို တစ်ကြိမ်သာ ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။ ၃၆၅ ရက်ဝယ်ယူထားပါက တစ်ကြိမ်သာ ဝယ်ယူနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး အခြား ၁လ (သို့) ၃လအား ထပ်မံဝယ်ယူလို့မရနိုင်ပါ။ (သက်တမ်းတိုးလို့မရပါ)။
အကျိုးခံစားခွင့်လွှဲပြောင်းမှုအတွက် မှတ်ပုံတင် (သို့) နိုင်ငံကူးလက်မှတ်သာလိုအပ်မည်ဖြစ်ပါတယ်။ အကယ်၍ အသက်မပြည့်သေးသူအား လွှဲပြောင်းလိုပါက မိဘ(သို့)အုပ်ထိမ်းသူ၏ မှတ်ပုံတင်(သို့) နိုင်ငံကူးလက်မှတ် မိတ္တူလိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။
အာမခံလက်မှတ်အားဝယ်ယူပြီးသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက် ခံစားခွင့်အားထုတ်ယူခွင့် လျှောက်ထားနိုင်ပါသလား?
အာမခံလက်မှတ်သည် ဝယ်ယူပြီး၂၄ နာရီကြာမှသာ စတင်အသက်ဝင် မည်ဖြစ်သည့်အတွက် အဆိုပါ ၂၄ နာရီနောက်ပိုင်းမှသာ ခံစားခွင့်အား ထုတ်ယူခွင့်လျှောက်ထားနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၏ပြင်ပတွင်ဖြစ်သည့် ဖြစ်စဉ်များသည် မိမိ၏ အာမခံအကျိုးခံစားခွင့်များအတွက် အကျုံးဝင်ပါသလား?
အာမခံသည် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းဖြစ်သည့် ဖြစ်စဉ်များအတွက်သာ အကျုံးဝင်ပါသည်။